नेपालले एमाले विभाजन गर्लान कि प्रचण्डको साथमा जालान ? - नेपालबहस
नेपालले एमाले विभाजन गर्लान कि प्रचण्डको साथमा जालान ?
| २०:३७:५९ मा प्रकाशित
२० चैत, काठमाडौं । एमालेको नवौ महाधिवेशनमा हालका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग ४३ मतको फरकले अध्यक्षमा पराजित भएका माधवकुमार नेपालको पार्टीभित्र बराबरी हैसियत थियो । तत्कालिन समयमा ४२ जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरु नेपाल पक्षमा थिए । तर ओलीले अचानक माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुष्पकमल दाहालसँग पार्टी एकिकरणको प्रस्तावसहित २०७४ सालमा चुनावी गठबन्धन गरे । चुनावी गठबन्धनसँगै २०७५ साल जेठ ३ गते एमाले र माओवादी दुवै पार्टी विघठन मात्रै भएनन दुई अध्यक्ष भएको नेकपा गठन भयो ।
नेकपा गठन भएसँगै पार्टी एकिकरणको काम हुँदा सबैभन्दा पहिला माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई पेल्ने काम भयो । नेपाल समूहको होल्ड रहेको जिल्ला कमिटीमा ओलीले माओवादी पक्षलाई दिए । निर्वाचनको बेला सहकार्य गर्दा पनि त्यस्तै भएको थियो । यसरी पेलिदै गएका नेपाल पक्षलाई ओलीले फागुन २३ गतेपछि पार्टीभित्रको गेट नै बन्द गरेर सडकमै पुर्याइदिए । पुस ५, २०७७ यता बिचलित हाउभाउ र बोलीमा सार्वजनिक मञ्चमा देखिने माधव नेपाल फागुन २३ पछि झनै कमजोर भएका छन् ।
‘अदालतले मलाई घुच्चुकमै हान्यो, बदला नै लियो, म त यता न उता अब कता जस्तो अबस्था पुगे’, भनेर आफैले भन्नुपर्ने अवस्था नेपाललाई आइलागेको छ । १६ वर्ष शक्तिशाली महासचिव भएको आफ्नै पार्टीको साधारण सदस्यबाट निलम्बित भएका छन् । एमालेका अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टिकरणमा नेपालले उल्टै ओलीलाई नै प्रतिस्पष्टीकरण बुझाएका थिए । नेपाललाई फागुन २८मै पार्टीभित्र पस्ने गेट बन्द गरेका ओलीले स्पष्टिकरण सोधेर थप सहजीकरण गर्दै निलम्बन गरे । पार्टीकै पूर्व महासचिव रहेका नेपाललाई ओलीले एकप्रकारले भन्ने हो भने सडकै पुर्याइदिए ।
एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्वाहीमा परेपनि नेता नेपालका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले भने उनी गलेका भने छैनन । ‘केपी ओलीले एमाले छोडेर गए हुन्छ, एमाले हाम्रो हो’ जस्ता अभिव्यक्तिले उनी नगलेको संकेत गरेको छ । नेपालसामु बाँकी रहेको ओलीलाई एक्ल्याउने काम नै हो त्यसका लागि उनले पार्टीभित्रै बलियोसँग पौठेजोरी खेल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालसँगै उनका समर्थक नेता र कार्यकर्ताले माओवादीमा जाने भन्दापनि आफैले निर्माण गरेको पार्टीमा संघर्ष गर्न चाहिरहेका छन ।
नेपालले यो तथ्यलाई राम्रोसँग बुझेका छन् यद्यपि उनलाई ओलीले पार्टीभित्र इन्ट्री नै गराउदैनन । ओली समूहका प्रवक्ता रहेका परराष्ट्रमन्त्रीको भनाई सुन्ने हो भने तत्काल पार्टी छाडेर गएपनि ओली समूहलाई खास फरक पर्दैन । निर्वाचनको समय आइनसकेकाले उनीहरु सत्तमा रहँदासम्म्को अवस्थमा ओली समूहले पार्टीबाट उनीहरुलाई गलहत्याउन चाहेको प्रष्ट देखिन्छ । तर नेपाल पक्ष सहजै बाहिर निस्कने पक्षमा छैन । कम्तीमा आधा एमाले बाहिर राख्ने योजनामा नेपाल पक्ष रहेको छ । सात लाख कार्यकर्ता मध्ये साढे तीन लाख कार्यकर्ता आफूसँग रहेको बताउदै आएको नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरेर पार्टी अलग बनाउने पक्षमा रहेको छ । ‘हामीसँग तीन लाख कार्यकर्ता छन् आधा एमाले हाम्रो हो जति उहाँहरुले सोच्नु भएको छ त्यो होइन’, नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भैसकेको छ ।
नेपाल पक्षले शुक्रबार दिउसो बसेको स्थायी कमिटी बैठक राखेर कार्यकर्तालाई देशव्यापी रुपमा पार्टी एकताका लागि दबाब दिन लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ । साथै गएको चैत ४–५ गते ललितपुरमा भएको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत दस्तावेजमा आएका सुझावलाई प्रकाशन गरेर सर्कुलर गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत अवधारणापत्रमा १० वटा टोलीले सुझाव दिएका थिए । ती सुझाव समेटिएका प्रतिवेदनलाई शनिवार अन्तिम रुप दिएर प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको छ ।
सो कार्यकर्ता भेलाले देशव्यापी रुपमा संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने अभियानलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका निम्ति प्रशिक्षण, अभियान, भेला कस्तो हुने भन्ने विषयलाई अन्तिम रुप दिएर सर्कुलर गर्ने भएको हो । घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेमाथि गरिएको कारबाही पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधान विपरीत र पूर्वाग्रही भएको निष्कर्षसहित पार्टी भित्रै फागुन २८को निर्णय पुनरावलोकनमा जानेगरी तयारी समेत गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपालका भनाइ र गराइमा बिरोधाभाष प्रष्टै देखिन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डसँगको बाक्लै उठबसले उनलाई एमालेबृत्तमा आफ्नै विश्वासपात्र कार्यकर्ताले समेत ससंकित नजरले हेर्ने क्रम बढेपछि एमालेभित्रै बसेर संघर्ष गर्नेतर्फ नेपालको ध्यान केन्द्रीत भएको बताइएपनि ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न पार्टीभित्र स्पेश नै दिइएको छैन ।
केपी ओलीको भनाईमा नेपाललाई सुधारिनका लागि निलम्बन गरिएको भएपनि नेपाल अहिले ओलीलाई देखाइदिन प्रचण्डसँग नजिकिएका छन् । उनका बोली र व्यवहारले प्रष्ट गर्छन्, नेपाल ओलीसँग मिल्दैनन् प्रचण्डलाई छोड्दैनन् । नेपालको यस्तो भावभंगीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ भने ओलीलाई गलाउने र एमाले फुटाउने अस्त्रको रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् । दाहालको रणनीति नेपालले नबुझेका त हैनन भन्ने प्रश्नले नेपाललाई आफ्नै कार्यकर्ताको कठघरामा उभ्याएको छ ।
नेपालले प्रचण्डसँग दिनदिनै छलफल गरेको देख्दा पार्टी विभाजन गर्लान कि आफैले अर्को पार्टी निर्माण गर्लाल भन्ने प्रश्न उठेको छ । एमाले नेतृत्वमा नेपालको पुनरागमनका लागि केपी ओलीको बहिर्गमन एकमात्र उपाय हो । जुन तत्कालका लागि सजिलो छैन । ओली इतरका एमाले समेटेर पार्टी कार्यालय र समानान्तर कमिटीहरु बनाएपनि यसो गर्दा उनीमाथि थप र अझ कडा कार्वाहीको संभावना जिवितै छ ।
पार्टी सदस्यताबाट निष्कासित हुँदै कर्णालीका चार सांसद भर्खरै
झोला निर्माण गर्दै रामपुरका महिला २ मिनेट पहिले
लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी, बैशाख १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने १७ मिनेट पहिले
दिल्लीका अस्पतामा अक्सिजनको अभाव, खेतबारीमै शवको अन्त्येष्टि गर्न अनुमति १७ मिनेट पहिले
डोटीमा मृतावस्थामा भेटिएकी महिलाको पहिचान खुल्यो २५ मिनेट पहिले
आजदेखि पशुपति क्षेत्रका सबै मन्दिर बन्द ३३ मिनेट पहिले
कोभिड खोप लगाएका र पहिले पनि संक्रमण देखिएका वीर अस्पतालका १५ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित ३८ मिनेट पहिले
बिरामीका लागि कर्णालीमा एम्बुलेन्स र हेलिकोप्टर व्यवस्था ४० मिनेट पहिले
भेषभूषामा सजिएका आमा समूह ४३ मिनेट पहिले
दुधौलीका तीन वडा एक हप्ताका लागि बन्द ५० मिनेट पहिले
फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ ५३ मिनेट पहिले
२४ वर्षपछि सडक कालोपत्र हुँदा स्थानीयमा खुशी ५६ मिनेट पहिले
आईसीयू र भेन्टिलेटरमा पुग्ने विरामीहरुको संख्या बढ्दो ३ घण्टा पहिले
वाग्मतीको सातौँ अधिवेशनमा छुट्टाछुट्टै कुर्सीको व्यवस्थापन हुने ३ हप्ता पहिले
लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको दुनाटपरीको संरक्षणमा वालिङ २ महिना पहिले
संक्रमितबाट संक्रमण फैलियो : जरो भेट्न सकेन, अझै थप्ने आशंका ! ९ महिना पहिले
इन्जिन निर्माता रोल्स–रोयसबाट ९ हजार कर्मचारी कटौती ११ महिना पहिले